बागमतीमा एक भोटको कमाल ! काँग्रेस अभागी, एमाले–माओवादी ‘लक्की’ | Ratopati
बिहीबार ३० बैशाख, २०७८ Thursday, 13 May, 2021
एक भोटको त्यान्द्रोमा अडियो डोरमणि पौडेलको सरकार
personगणेश दुलाल exploreमकवानपुर access_timeचैत २९, २०७७ chat_bubble_outline0
हेटौंडा । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसँगै वागमती प्रदेशको सत्ता समीकरणमा रोचक परिदृश्य देखिएको छ । यो प्रदेशमा एमाले, कांग्रेस र माओवादी तीनै दलको भूमिका फगत एक भोटमा अड्किएको छ । बागमती प्रदेश सभामा कुल ११० जना सदस्य छन् । नेकपा एकीकृत हुँदा उसँग ८० जना सांसद थिए । पार्टी विभाजनपछि एमालेसँग सभामुखसहित ५७ सांसद छन् भने माओवादी केन्द्रसँग २३ जना छन् ।
प्रदेश सरकार गठनका लागि ५६ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । सरकार चलाइरहेको एमालेसँग सभामुखबाहेक ५६ सांसद छन् । एकजना प्रदेशसभा सदस्य निर्णायक हुँदा एमालेको सरकार टिकेको छ ।
एक भोटले काँग्रेसको भाग्य खोसियो !
नेकपा विभाजित हुनुपूर्व बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका खेलिरहेको थियो । नेकपा फुटेपछि एक मत नपुग्दा कांग्रेसको प्रतिपक्षी भूमिका खोसिएको छ ।
प्रदेशसभामा कांग्रेसका २२ सांसद छन् । तर, माओवादी केन्द्रसँग २३ सांसद रहेकाले काँग्रेसको प्रतिपक्षी भूमिका माओवादीको भागमा परेको छ । माओवादीसँग एक मत बढी भएका कारण तीन वर्षसम्म प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको कांग्रेस तेस्रो दलमा खुम्चिएको छ ।
यस प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख इन्द्रबहादुर बानियाँ थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिकाबाट हटेसँगै हाल उनको सेवा सुविधा काटिएको छ । एक भोट बढी भएका कारण माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्ष दल बनेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता शालिकराम जमरकट्टेलले अब बानियाँले पाउँदै आएको सुविधा उपभोग गर्नेछन् ।
एमाले–माओवादी ब्युँतिदा प्रदेशमा काँग्रेसलाई झड्का !
वैशाख २२ पछि ९ सय ७५ संक्रमितको शव सेनाद्वारा व्यवस्थापन
सांसद पदबाट राजीनामा दिएर ओलीलाई पदमुक्त गर्न आवश्यक : भीम रावल
थप ९३०५ मा संक्रमण पुष्टि, ४ हजार बढी निको भए
गण्डकीमा ‘ट्वीस्ट एन्ड टर्न’ : राजीनामाको तीन दिन पछि गुरुङ नै मुख्यमन्त्री
केएमसीमा पनि अक्सिजन अभाव, कोरोना संक्रमितको उपचारमा समस्या
पाकिस्तानमा कोरोना सङ्क्रमणबाट २ सय बढी चिकित्सकको मृत्यु
७० आरोही सगरमाथा शिखरमा
निषेधाज्ञा जारी गर्न बाँकी चार जिल्ला
बेलायतमा कोरोनाबाट थप ११ को मृत्यु, दुई हजार बढी संक्रमित
सरकारको मात्र भर नपरौँ, डरलाग्दो अवस्था सृजना भैसक्यो : वर्षमान पुन